Ubuhlobo Nomntu Wakowenu: Kutheni Kufuneka Ndenze Uxolo ? | Ulutsha Luyabuza
FUNDA NGOLUNYE ULWIMI ISpanish Isi-Iceland Isi-Iloko Isi-Indonesia Isi-Itali IsiAlbania IsiAmharic IsiArabhu IsiArmenia IsiAzerbaijani IsiAzerbaijani (sesiCyrillic) IsiBhulu IsiBulgarian IsiChichewa IsiCreole saseHaiti IsiCroatia IsiCzech IsiDanish IsiDatshi IsiEstonia IsiEwe IsiFinnish IsiFrentshi IsiGeorgia IsiGrike IsiHausa IsiHebhere IsiHiligaynon IsiHindi IsiHungary IsiJamani IsiJapan IsiKazakh IsiKikamba IsiKinyarwanda IsiKirghiz IsiKirundi IsiKorea IsiLingala IsiLithuania IsiMakedonia IsiMalagasy IsiMalay IsiMalayalam IsiMaltese IsiMyanmar IsiNepali IsiNgesi IsiNorway IsiNzema IsiPangasina IsiPapiamento (saseCuraçao) IsiPersi IsiPhuthukezi IsiPolish IsiRashiya IsiRomania IsiSerbia IsiSerbian (saseRoman) IsiShona IsiSinhala IsiSlovak IsiSlovenia IsiSwahili IsiSwedish IsiTatar IsiTelugu IsiThai IsiTshayina SaseMandarin (Esenziwe Lula) IsiTshayina SaseMandarin (Esiqhelekileyo) IsiTswana IsiTurkish IsiUkrainian IsiUmbundu IsiVietnam IsiXhosa IsiYoruba IsiZulu
Abona bahlobo ungavaniyo nabo
Izizathu ezimbini zokuba kwenziwe uxolo
Abantwana bakowenu baye babizwa ngokuba “ngabona bahlobo ungavaniyo nabo.” Uyabathanda, ibe nabo bayakuthanda—kodwa ngamanye amaxesha nikhe nibhidane. UHelena oneminyaka eli-18 uthi: “Umntakwethu omncinci uyandicaphukisa. Uyazi ukuba ndicofwa phi ibe nini ukuze andicaphukise!”
Ezinye iingxabano zinokulungiswa ngokuthetha. Ngokomzekelo:
Amakhwenkwe amabini ahlala egumbini elinye anokuxabana ngalo. Ingalungiswa njani? Mawathethe ibe ngamnye azi ukuba elo gumbi asilolakhe yedwa. Mawasebenzise umgaqo weBhayibhile okuLuka 6:31.
Intombazana inokunxiba iimpahla zikadade wayo ingazibolekanga. Ingalungiswa njani? Mabathethe ngale ngxaki baze babekelane imida efanelekileyo. Mabasebenzise umgaqo weBhayibhile okweyesi-2 kaTimoti 2:24.
Kwezinye iimeko, ukungavani kwabantu abazalwa kunye kuba yingxaki ibe kusenokubangela imiphumo emibi. Cinga ngale mizekelo mibini yeBhayibhile:
UMiriyam noAron babemmonela uMoses, umntakwabo ibe imiphumo yaba buhlungu. Funda ingxelo ekwiNumeri 12:1-15. Emva koko uzibuze: ‘Ndingakulumkela njani ukumonela umntwana wasekhaya?’
UKayin waba nomsindo kangangokuba wabulala umntakwabo uAbheli. Funda ingxelo ekwiGenesis 4:1-12. Emva koko uzibuze: ‘Ndingakunqanda njani ukuba nomsindo kumntakwethu okanye kudadewethu?’
Nokuba kunzima kangakanani na ukuxolelana nomntwana wakowenu, zikho izizathu ezimbini zokwenza uqonde isizathu sokuba kubalulekile.
Kubonisa ukuba ukhulile. UAlex umfana oselula uthi: “Ndandidla ngokuxabana noodadewethu ababini abancinci. Ngoku andisabaphathi njengakuqala ngenxa yokuba ndizolile. Unokuthi ndikhulile.”
IBhayibhile ithi: “Ozeka kade umsindo unokuqonda okuninzi, kodwa ongenamonde uphakamisa ubudenge.”—IMizekeliso 14:29.
Luqeqesho oluya kukunceda kwixesha elizayo. Ukuba awukwazi kubanyamezela abantwana bakowenu, uza kukwazi njani kumntu otshate naye, umntu osebenza naye, umqeshi wakho okanye nabani na osoloko ukunye naye?
Inyani engenakuphikwa: Indlela oza kuba phatha ngayo abanye ixhomekeke kwindlela okwazi ngayo ukuthetha ibe ayikho enye indawo onokukhulisa kuyo ubuchule bakho ngaphandle kwentsapho.
IBhayibhile ithi: ‘Ekubeni kuxhomekeke kuni, yibani noxolo.’—Roma 12:18.
Ngaba uyafuna ukulungisa ukungavani nomntwana wakowenu? Funda inqaku elithi “Oko kuthethwa lolunye ulutsha” uze ujonge nephepha onokubhala kulo elihamba neli nqaku elinomxholo othi, “Ukuxolelana Nabantwana Bakowenu.”
“Ndinoodadewethu abathathu, ibe ukuhlala sivana akusoloko kulula. Kwangaxeshanye, ndifumanise ukuba ngabona bantu bandazi kakuhle nabaya kusoloko bendixhasa.”—UJessica.
“Ngamanye amaxesha ndikhe ndicaphukise umntakwethu okanye ndicatshukiswe nguye. Sekunjalo, ndiyamthanda umntakwethu. Usoloko endenza ndizithembe. Ndiyayithanda indlela enza ngayo—akanikezeli ibe usoloko esenza ngakumbi kunokuba kulindelekile.”—UTyler.
“Ndiyakuthanda ukuba phakathi kwabantu, ngoko kumnandi ukuba nabantakwethu ababini. Ngenxa yokuba bengamakhwenkwe, ukuba kunye nabo kundifundise izinto ezininzi ngendlela endimele ndibaphathe ngayo abo bangafaniyo nam. Kuyintsikelelo kum ukuba nabantwakwethu.”—UCameo.
Ukuxolelana Nabantwana Bakowenu